Ukucabanga kwesilinganiso seDutchman sekuye kwafa: okubuthakathaka nokungenandaba: uMartin Vrijland
Isimo se-Dutchman esiphezulu sishonile: sinesibindi futhi asiqapheli
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-2 Julayi 2019	• 11 Amazwana
Uma isihloko salesi sihloko sikukhuthaze ukuba ufunde okuqukethwe, lokho akusho ukuthi wena uqobo unobuthakathaka futhi awuhambisani. Kungenzeka nokuthi uvumelana nesihloko noma ufuna ukwazi nje kuphela. Kodwa ake sithembeke: uma ubuza abantu abakuzungezile ngokulinganisa, khona-ke iningi elijwayelekile elivamile liwukuthi abantu baxosha amahlombe abo kukho konke futhi banomuzwa wokuthi abakwazi ukwenza lutho ngakho. Igama elithi "ithemba" nelithi "positivism" ikakhulukazi benza kahle (bheka lapha) futhi uma ubaluleke kakhulu ke 'awunayo' noma 'umcabango woqhinga'. Ukuhle kulungile: Mina ngokwami ​​angikhathazekile kakhulu (isibonelo) i-40 yami yami mayelana nalokho okwenzeka kwezombusazwe noma emhlabeni. Ngezinye izikhathi ubambe okuthile, kodwa kungenjalo kubaluleke kakhulu ukuthola imali eningi, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngokukhululekile.
Kodwa ngezinye izikhathi ukukhanya kubonakala ukuthi sihlaselwa futhi siqhutshwa ngokuphindaphindiwe emaphoyiseni ngokusebenzisa izinyathelo ezincane. Ngami, lokho kwaholela esinqumweni sokwenza isinyathelo. Ngangingakwazi ukuhlala emsebenzini wabaphathi bamathengisi abakhokhelwayo futhi ngibheke ukuthi uhulumeni uyaqhubeka kanjani ukusiphawula. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu kufanele enze lokho kukhetha. Ngempela, ngengozini yokuthi indlu yakho nezindlu zakho zizolahleka, kodwa ijele elikuzungezile liyingozi nakakhulu kunokungaqiniseki kwesikhashana okwamanje okugwinya. Kungani ngikhuluma lokho? Ngoba kunjalo. Inkululeko eyengeziwe iyasuswa, kunemithetho eyengeziwe (kanye nabaphathi bezinhloli zalawo mithetho) futhi sithuthela esimweni samaphoyisa lapho wonke umuntu nomuntu angalandelwa khona futhi ngisho nokujeziswa uma unikeza usizo kwabanye.
Uma kamuva sinenkampani ngaphandle kokheshi futhi zonke izenzo zilandelana nge-blockchain, lokho okungeke kwenzeke kuyinkinga enkulu ekamelweni lakho lokusebenzisa imali. Sekuvele kungenakwenzeka ukuthi asebekhulile bavakashele bese bepheka ndawonye, ​​ngoba umhloli angase ahlale esho ukuthi ngubani ohlala ndawonye nokuthi impesheni incishisiwe. Kungenakwenzeka ukunikeza umuntu ongenamakhaya igumbi elisendlini yakho, ngoba uhlala ndawonye futhi ungasuswa ekuzuzeni izindlu zakho, inzuzo noma iziphathimandla zentela zicabange ukuthi uhlala ndawonye njalo njalo. Esikhathini esizayo esiseduze, uma ngisho ne-DNA yakho isendaweni egciniwe futhi i-smartphone yakho irekhoda zonke izinyathelo ozithathayo (i-pedometer isivele ithandwa abaningi), ulinganisa impilo yakho futhi wazi kahle ukuthi ungubani, okukude nawe , lapho uhamba khona futhi lapho imali yedijithali ilandelela khona lokho okuthengayo nokuthengisa, awukwazi ukunikeza ulwazi oluxhunywe ngesinkwa noma ipakethe yobisi, ngoba ujeziswa usizo lomuntu okufanele abeke umbiko kuhulumeni.
Ukuhlelwa kwe-slumbering kwakhelwe ohlelweni lokuthenga ngesikweletu somphakathi, lapho ufuna ukuzigcina ungenandaba nabantu abangathonya izikweletu zakho. Lolu hlelo luvame eChina wangena unashedlyly. E-Netherlands nakwezinye izindawo ze-EU, lokho kuzoba okucashile kancane. Lapha ukujwayela sekuvele kwenziwe ngokusebenzisa izibuyekezo ku-Webshops, i-Airbnb, i-Linkdin nazo zonke izinhlobo zezokuxhumana. Kodwa-ke, uma i-blockchain ilandelela zonke izenzo zakho futhi iqinisekise (ngokusebenzisa ingqalasizinda yale blockchain) ongayiqiniseki ukuthi zonke lezo zenzo zenziwe nguwe, iphethini lakho lonke lokusebenzisa imali, iphethini lakho lokusebenzisa imali kanye nenethiwekhi yakho yomphakathi ingaba yinto engacacile. Emhlabeni 'we-intanethi yezinto' namathegi e-DNA angenantambo kukho konke ongayithenga (kusuka inyama, isinkwa, izimpahla ezimhlophe kanye nezakhiwo zangempela) kubuye kucaciswe ngokuningiliziwe ukuthi nonke niyithenga, badayise futhi badle. Uma izikweletu zakho (ngendlela ye-blockchain bitcoin-like-coin) zingasuswa ngumbuso ngenxa yendlela "yokuziphatha okubi" noma ukusebenzisana nabantu abanokuziphatha okubi "ngakho-ke uzobe uqaphele ukuthi ungubani .
Konke lokhu kuzosungulwa isinyathelo ngesinyathelo futhi ngokuqinisekile kuzoqala ngezinto ezinjengephammende eziphakeme noma eziphansi ekunakekelweni kwezempilo kuye ngokuthi ukuziphatha kwakho kokuziphatha, kodwa ekugcineni nawe oxhumana naye. Ngemuva kwalokho, ukusebenzisana nabantu abaphuza noma ababhema okuningi kungaholela ekuthonyeni ukuziphatha kwakho. Ngifaka lapha isithombe sesikhathi esizayo ongase ususwe, kodwa lokhu kusondele kunalokho ocabanga ngakho futhi ngoba abantu babonakala beyizilwane, sijwayele uhlelo lokuthandwa ngezokuxhumana, kungakhathaliseki ukuthi ukuxhuma nge-Instagram , Snapchat nokubeka 'izibuyekezo' kuzo zonke izinhlobo zezinsizakalo.
Amaphuzu okushayela ilayisense aseyisibonelo esihle sokuthi leso sijeziso sizosebenza kanjani. Futhi okuzayo kuza ukuthi ngubani ozojeziswa. Siya kuzo zonke izinhlobo zezintambo, ngokuphindaphindiwe ekuqondeni izinhlelo zezikweletu nokulandelela kwezinyathelo zonke. Ngeshwa, abantu abaningi abafunda lokhu bangabamba iqhaza ezinhlelweni ezenza konke lokhu kube lula noma bayingxenye yabaphathi nabalawuli bezimiso. Abanye ukuhola isizukulwane esisha sokufeza le misebenzi op ukungahloniphi nokulalela. Ingane e-leash mhlawumbe iyisimboli kunazo zonke yendlela umphakathi uthathwe ngayo. Wonke umuntu usekhondweni futhi sifundisa omunye komunye ukuthi kuhle ukuhlala e-leash. Sihlolisana ukuba sibe yi-leash futhi kukhona amabutho onke ahambahambayo ajezisa abanye abantu uma imithetho iphukile. Abanye bakulungele ukuthatha izinhlawulo eziphakeme noma izinhlawulo futhi yilokho umshini oyile kahle ogijimela ngesivinini esigcwele, ngoba wonke umuntu ufuna ukugcina indlu encane yezilwane kanye nezicathulo ezincane ezingadini. Sitshela omunye nomunye 'ukuhlala ku-leash kuhle futhi kuphephile'.
Awusenaso isikhathi sokulinda ukuze uthathe isenzo. Futhi akuyona into ehlakaniphile ukucabanga ukuthi uhulumeni uzokusindisa. Uhulumeni kanye nenkululeko yentando yeningi iyimbangela yendlela yokuboshwa ejele. Uma nje usiza ukugcina uhlelo, empeleni uqinisile futhi ifa lakho kubantfwana bakho: umbuso wezombusazwe wedijithali. Uma izingane zakho zikubuza kamuva ukuthi kungani ungenzanga noma yimuphi umzamo wokwenza noma yini ngakho: uyini impendulo yakho? "Angikwazi ukwenza lutho ngedwa"? Yebo, ungenza okuthize, kodwa usabe ukwesaba ukulahlekelwa okuqinisekisiwe kwakho futhi ubambelele emcabangweni wamanga wokuthi konke kuzoba kuhle uma uzindla ngokwanele, uthandaza, wenza ama-yoga umzimba noma isenzo sokusebenza esingokomoya sokwenza uzizwe unecala ukujabulisa. "Yebo, kodwa uma ngizama ukushintsha okuthile ngedwa, ngizolahlekelwa umsebenzi wami futhi omunye umuntu uzothatha isikhundla sami futhi akukho lutho oluzoshintshaAkuyona impikiswano noma. Lokhu kuxolisa kuwe, futhi ngokuthatha leso simo sengqondo unomthelela wokumisa isimo sengqondo sokuhlangana. Akukhulunywanga ngabaculi abaningi abakuzungezile (bheka incazelo).
Isikhathi sokusebenza manje. Lokhu kuqala ngokuqaphela ukuthi kwenzekani (okuyi-tip of the veil ngenhla) bese uxazulula inkinga. Ngokuba lokho kufanele uqale ukuphila kusuka ezingeni elisha lokuqaphela (bheka lapha). Ngesikhathi esifanayo kufanele usebenzise lokho, ngoba kungenjalo uzobe ugeza ingubo (engokomoya) ngaphambi kokuphuma. Funda futhi lesi sihloko vumelana futhi uthole ukuthi ungaba kanjani ukhonkolo empilweni yakho. Eqinisweni, kufanele uzibuze ukuthi yini ongayenza uma indlu yakho isemlilweni futhi umlilo uqhuma: hlalani nilinde umlilo ukuba ungenakulungiswa, zama ukucima umlilo noma ulinde kuze kube sekwephuzile Kungabaleka ngisho nendlu? Isikhathi sokuthatha isenzo!
Ukukwabelana ngezihloko ezivela kule sayithi kubonakala sengathi kuvinjelwe yi-Facebook. Ngakho uma wabelana, abangani bakho bamane nje bengaboni lesi sihloko ku-feed yabo yezindaba. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokukhuluma nabantu ngenkuthalo nangomuntu siqu noma ngokuthumela ama-athikili ngokuqondile kubo. Lokho kungase kube yisiqalo sokuqala ukusiza ukuqala ushintsho. Lewebhusayithi igcwele ama-athikili akwenza wazi ukuthi yini evelayo kuwe. Yenza okuthize futhi uphule ukungahambi kahle kwakho.
Isivumelwano sezulu: ukuba abantu egqokeni elihle
Amathegi: afakiwe, ukucabanga, okungahambi kahle, shaya
2 July 2019 ku-14: 12
Vumelana ngokugcwele nalesi sihloko, isikhathi sokusebenza kuso ..
2 July 2019 ku-15: 49
Kulungile .... kodwa iningi. Awunawo amandla okuqonda nokuqonda konke. Kungakhathaliseki ukuthi uzikhomba kaningi kangakanani. Akungena ngaphakathi. Ngenxa yenye yezingcezu zakho zangaphambilini, lapho usho khona uRoald Boom. Ngiye ngibheka amanye amavidiyo akhe we-tube, futhi uyichaza kahle kakhulu efilimu yakhe lapho ebona khona abantu njengeNPC (hhayi ukudlala izinhlamvu). Yiyiphi empeleni inguqulo yanamuhla ye-Allegory of the Cave sikaPlato.
2 July 2019 ku-17: 04
Usho ukuthi ufunda lesi sihloko:
2 July 2019 ku-17: 44
Ngempela ngiyifunde futhi .... Ngicabanga ukuthi ukucabanga akusiyo kuphela isizathu. Okunye okusemandleni omuntu ovamile wesiDashi noma noma yikuphi ubuzwe. Ngeke ukwazi ukubakhombisa nganoma yiziphi izimpikiswano, ukuqiniswa njll oza nazo. Ukukhanya kuvuliwe kodwa akekho ohlala ekhaya.
2 July 2019 ku-22: 40
Katwijkers kini nonke
Uma, njengomhleli wephephandaba, ukhuluma ngenduduzo
othandekayo osanda kukhonjwa ngakho-ke uyazi ukuthi uwela yonke imingcele yozwela. (iningi livame ukusetshenziselwa kodwa kulokhu akulona uzwela)
Noma uyazi ukuthi ngeke kube khona ukumelana ngoba akukho othandekayo, ngubani oyothi? Asikwazi nje
Kukhona indawo ehlotshiswe ngokukhethekile yabezindaba ngenkathi kunesidumbu? Linda !!! Kungani kwakungekho inkomfa yocwaningo kusengaphambili mayelana nokutholakala komuntu olahlekile, ngoba lo mshini ucacise ukuthi mhlawumbe ubugebengu. Abantu abangu-17million bahamba ngokungahambisani nendaba yonke futhi banelungelo eliphelele lokuveza obala, ukuchaza okuvela kumaphephandaba / amandla / amaphoyisa.
Kungani indunankulu engazange izwe enkomfeni yabezindaba. kungani kungekho mhlangano wenkomfa nhlobo emva kokunaka okukhulu kuwo wonke abezindaba (ukusika nokunamathisela amaforamu). Kungani igama lomkhumbi / isikebhe engaziwa? Kungani kungekho zithombe zogada ogwini / amaphoyisa noma i-marrechaussee ngokudluliswa? Kungani uPeter R de Vries ethi kumele u-Anja uzibulale. Uma u-Anja engavumi ngokwengqondo, kungani abezindaba bengabhala ngakho?
Kungani umphakathi ugcinwe ngokungabaza mayelana neqembu lomndeni noma ilungu lomndeni eBlauwen Bock ngemuva komhlangano wokugcina, kwase kumenyezelwa ukuthi kwakuyisiphuzo somndeni futhi "omunye" womndeni usho ukuthi: thatha itekisi.
Futhi-ke kunemibuzo eminingi eyenza inkinga yonke ibe yinto engacabangi njengezindaba ezingamanga, zithini izintatheli ezake zifika ngezithombe zomkhumbi nabasebenzi abazitholile u-Anja.
Noma ingabe izintatheli azisekho futhi konke kunqunywe futhi kunamathiselwe? U-Katwijkers akanqikazi ukubuza imibuzo.
Okhulumela amaphoyisa kuphela (uDick Goijert) onemakrofoni uye waletha indaba kubantu abayizigidi ezingu-17, kumele sikholwe ukuthi njengomfundisi
Lapha indaba kaDick Goijert evela emaphoyiseni
unogwaja omhlophe wabhala:
3 July 2019 ku-08: 58
Ngempela kuyindaba engavamile, ukunakwa kwezindaba ezidlulele yedwa sekuvele kusolisayo. Kunezinto eziningi ezingekho engicabanga ukuthi ziyiqiniso, kodwa ukunakekelwa kwezokuxhumana kuvame ukulinganiselwe, ngezinye izikhathi nje iphephandaba lendawo futhi yilokho. Ngicabanga ukuthi amaphephandaba akhetha kakhulu ngokukhuluma izinto zezindaba futhi uma lokhu kuthola okungaphezu kokuvamile okusobala ngakho kusolisayo noma mhlawumbe indaba yokukhohlisa.
3 July 2019 ku-08: 49
Esikhathini se-movie sokudutshulwa kwe-movie kusuka ku-1993 ungabona kahle ukuthi siya kuphi, esikhathini esidlule ukuthi ngibone ifilimu futhi sengisitshele ukuthi umhlaba uya khona.
Manje ku-2019 sibona ukuthi lokhu kuyiqiniso ngempela.
Inqubomgomo yokubhema kuyisibonelo esihle, bese kuthi ukucindezela kokudla kwemifino. Ukusetshenziswa kotshwala kuzosheshe kugwetshwe njalo njalo. Sikude kangakanani kusuka kubhuloho ocolile obona ku-ifilimu ukuthi i-3D inyatheliswe njengomphumela wokukhipha ekuseni?
Kule ifilimu ubuye wabona ukuthi uhlawuliswe kanjani ngokufunga noma ukuqalekisa, okwakungena kuphrinta kusuka odongeni. Manje uhlelo olunjalo lusebenza e-China futhi esikhundleni sephrinta inhlawulo ithunyelwa nge-SMS.
Okwamanje ukuthuthukiswa okukhathazayo kakhulu kodwa kwabaningi abangabalulekile, uyazi yini leyo mindeni? umsebenzi omuhle, indlu ebiza kakhulu, ungabhemi, ungaphuzi utshwala udle ukudla kommbila. Izingane zigonywe ngokumelene nanoma yini nayo yonke into ngakho-ke i-allergen kunoma yini nayo yonke into.
Idlalwa ngokugcwele yizindaba.
Kubonakala sengathi abantu abasasavunyelwe ukuzijabulisa esikhathini esizayo, ngaphandle mhlawumbe ngokusebenzisa iqiniso langempela.
3 July 2019 ku-10: 06
Madurodam, izwe elisha elinesibindi. Abekho abantu abahlala lapha kodwa ama-robot. Ngisho noma "imizwelo" yabo ifakiwe. Futhi ukukwazi ukucabanga ngalokho
ama robot hhayi ngokuqondile ngenxa yalesi simo.
Konke i-gravy iphelile. Konke kuyiphutha, konke kuqondiswa lapha.
Inhloso yalokhu ekugcineni amandla, amandla aphelele
ngaphakathi nangesithakazelo sombuso wabafana beskripthi. Labo bantu bahlela ukungalokothi baphele amandla lawo futhi, ngisho nangendlela evamile.
Kuzofika isikhathi lapho ngisho nokhula kungavunyelwe ukuba ukhula, abe ukhula. Ngoba abafana bokhula lwesikripthi babonisa ukuhlubuka, ukuvukela uhlelo lwabafana beskripthi.
4 July 2019 ku-20: 02
Manje ngiyazazi izivimbelo ezivimbela ukuba ngingenzi isenzo. Okukhulu kunokwenzeka mhlawumbe isiphetho sikaMartin .... Futhi uma ngifunda ukuphendula, okungenani amagama, kuningi abangaboni (okwamanje) abakwazi ukuphendula ngokuvulekile, futhi angisho ukuthi njengesihlamba, nginomunye wabo!
Ayikwazanga yini ukuthi ungitshele ukuthi yini okudingeka iyenze ngaphambi kokuba ngithathe isenzo ...
5 July 2019 ku-11: 34
Vele ucabange ukuthi izinsizakalo zamadoda avela kwiskripthi azi ukuthi ngubani uSiep kanye namanye ama-posters asele sayithi.
Iqiniso lokuthi kunezimpendulo ezingenzeka ukuthi zingabe zamesaba ukuthumela amaphuzu aqakathekile kusayithi likaMartin nje lisho ukuthi labo abaphendulayo bayazi kahle ukuthi siphila ebubini bokubuswa, ukuhlukumezeka okukhohlisayo, okukhohlisayo.
Isizathu esanele sokugxeka!
5 July 2019 ku-18: 49
Ngimi, ngikhathazeke kakhulu ngendawo yami eseduze, ngicabanga ukuthi akekho abantu abane-ajenda emibili kunezinsizakalo. Futhi nakuba bazi ukuthi ubani oza ukuzobona futhi aphendule lapha, kungukuthi (okwamanje) engaziwa imvelo yakho.
« Ubugebengu yi-alibi ekahle ekuqedeni ukheshi nokulawula okuphelele kwabantu
Abantu bangakhuluma kanjani 'ngokuqwashisa' futhi ngesikhathi esifanayo basize ukugcina uhlelo? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 59.119